Apple ichapemberera Zuva reNyika nekuburitswa kutsva kweApple TV + | Ndinobva mac
Apple yekupemberera Zuva reNyika nekuburitswa kutsva kweApple TV +
Gore rega rega Apple inopemberera Zuva repasi nenzira yakasarudzika. Kana zvisiri nedambudziko rakakosha paApple Watch, zvinodaro nekugadzira kuburikidza neApple TV + - Iyo nzira yakanaka iyi sezvo tichigona kukoshesa nenzira yekutarisisa zvinoitwa naAmai Pasi kwatiri uye nekusiyana, zvinokuvadza zvatinoita. Iyi 2021, iyo kambani yeAmerica inogadzirira zvigadzirwa zvitsva kune yako yekutenderera chiteshi chevaraidzo. Kuve iyo yakakosha kosi, iyo yakanyorwa Iyo Gore Pasi Rakachinja
1 Zvinyorwa «Gore Renyika Rakachinja» reZuva rePasi
2 Apple inotorawo mukana uye inotangisa mwaka wechipiri weTiny World yakanyatsobatana nemasikirwo
3 Tichavawo nemwaka wechipiri wePasi Panguva Yeusiku Muvara
Zvinyorwa «Gore Renyika Rakachinja» reZuva rePasi
Musi waApril 22 wegore rino tine chiitiko chekupemberera zvakare. Zuva rePasi riri pano zvakare uye isu tinofanirwa kuramba tichipemberera iri zuva kuyeuka kuti isu tinogara munzvimbo yakagovaniswa nevamwe vazhinji zvisikwa Hatisi kungotaura nezvevanhu. Icho chinhu icho nguva zhinji chinoita setiri kukanganwa. Nechikonzero ichi, Apple yakazivisa kuti ichatanga kuburitsa zvigadzirwa zvitsva senge iri zvinyorwa zvinonzi Gore Pasi Rakachinja paApple TV +. Ichi chinyorwa chiri yakataurwa neanozivikanwa David Attenborough, inotarisa nyaya dzinosimudzira dzakabuda mukati megore rakaoma kwazvo revanhu.
Zvinyorwa icharatidza mifananidzo yakasarudzika kutenderera pasirese mushure megore risati ramboitika. "Gore Renyika Rakachinja" inotora nzira nyowani yekuvharirwa kwepasi rose uye nenyaya dzinosimudzira dzakabuda mazviri. Kubva pakunzwa shiri dzichiimba mumaguta asina vanhu, kusvika pakupupura mawhale achitaurirana munzira nyowani. Tichaonawo capybaras munzvimbo dzekuSouth America. Vanhu vanobva kumativi ese epasi vakave nemukana wekuita nehunhu zvisati zvamboitika.
"Gore Renyika Rakachinja" iri yakaburitswa neBBC Studios Natural History Unit, inotungamirwa naTom Beard, uye yakaburitswa naMike Gunton naAlice Keens-Soper uye seizvo Attenborough inoisa zvakanaka.
Mukati megore rino rakaomesesa, vanhu vazhinji vakatenda kukosha uye runako rwepanyika uye vakatora nyaradzo huru kubva kwariri. Asi kuvharirwa kwakagadzira zvakare kuyedza kwakasarudzika kwakaratidza kujekesa kwatinoita pane zvakasikwa. Iyo nyaya dzekuti mhuka dzesango dzakapindura sei Vakaratidza kuti kuita nyangwe shanduko diki pane zvatinoita zvinogona kuita mutsauko mukuru.
Apple inotorawo mukana uye inotangisa mwaka wechipiri weTiny World yakanyatsobatana nemasikirwo
Mwaka wechipiri we Tinyika Nyika. Yakataurwa uye inogadzirwa naPaul Rudd ("Ant-Man"), inopa vanoiona maonero akasarudzika pane zvakasikwa. Kujekesa huchenjeri nekusimba kwezvisikwa zvidiki pasi. Iine anopfuura mazana maviri emhando dzakatorwa uye maawa mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu, zvikamu zvitanhatu zvinogovera nyaya dzinoshamisa uye inoshamisa cinematography inosimbisa izvo zvisikwa zvidiki uye zvinoshamisa zvinhu zvavanoita kuti vararame. Kwenguva yekutanga tichakwanisa kuona anemone shrimp, vachirova maoko kuratidza chiratidzo chavo sevanosuka hove dzinodya dzimwe mhuka. Zvakare iyo "inoruma" maitiro e fang blenny hove, yakapfurwa inononoka kufamba pamwe zvisati zvamboitika kushandiswa kwepamusoro-kumhanya chipoko kamera. Etruscan shrews, inozivikanwa kuva mhuka dzine nzara pasi pano.
"Nyika diki" iri inogadzirwa naPlimsoll Productions uye inogadzirwa naTom Hugh Jones, uyo anoshandawo semunyori naDavid Fowler. Grant Mansfield naMartha Holmes vanoshandawo sevarimi vakuru panzvimbo yePlimsoll Productions.
Tichavawo nemwaka wechipiri wePasi Panguva Yeusiku Muvara
Tom Hiddleston acharondedzera mwaka wechipiri we Pasi Pasi Husiku Muvara, Zvinyorwa izvo zvavanoshandisa hunyanzvi hwehunyanzvi ku Tora mhuka usiku zvisati zvamboitika.
Iyo yekuvhuvhuta yepakutanga akateedzana "Earth Panguva Yeusiku Mune Ruvara" iri kudzoka zvakare kwemwaka wechipiri nezvikamu zvitanhatu zvitsva zvakataurwa naTom Hiddleston ("Avengers"). Uchishandisa mamiriro-e-iyo-kamera makamera uye yechimurenga post-yekugadzira maitiro, "Earth At Night Mu Ruvara" inopa iyo anoshamisa manheru ezvisikwa nekujeka kutsva kunoshamisa. Dzimwe dzisati dzamboona hunhu hwemhuka panguva dzemanheru, dzakatorwa dzichishandisa mwenje wakaderera-mwenje uye mwenje wemwedzi uzere. Ivo vanosanganisira nzou dzinorwira mafisi akatenderedza nyeredzi dzakapenyerwa nemvura uye kangaroo dzichinyangira murima kuti dziwane vakwanyina. Dzimwe mhuka mumwaka mutsva dzinosanganisira macougars, polar bears, stingray, uye diki planktonic hupenyu husiku mugungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple yekupemberera Zuva reNyika nekuburitswa kutsva kweApple TV +
Imba yerima inovandudzwa nenhau dzinonakidza
Kunyangwe Matimu achivandudza, haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo ye macOS